विश्वकप क्रिकेटः को–को भिड्दैछन् क्वाटरफाइनलमा ? - Himalkhabar.com
खेलकुदआइतबार, चैत्र १, २०७१
विश्वकप क्रिकेटः को–को भिड्दैछन् क्वाटरफाइनलमा ?
जारी आइसीसी विश्वकप क्रिकेटमा १ चैतमा समूह चरणका सबै खेल सकिएसँगै क्वाटरफाइनलका प्रतिष्पर्धीहरूको टुङ्गो लागेको छ ।
१ चैतमा भएको समूह चरणका आ–आफ्ना अन्तिम खेल जितेर पाकिस्तान र वेष्ट इन्डिजले अन्तिम आठमा आफ्नो स्थान पक्का गरे ।
समूह ‘बी’ बाट यसअघि नै भारत र दक्षिण अफ्रिका तथा समूह ‘ए’ बाट न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, श्रीलङ्का र बंगलादेश क्वाटरफाइनलमा पुगिसकेका थिए ।
पहिलो क्वाटरफाइनल प्रतिष्पर्धा १८ मार्चमा दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकाबीच हुनेछ । त्यस्तै, १९ मार्चमा बंगलादेश र भारतबीच, २० मार्चमा अष्ट्रेलिया र पाकिस्तानबीच तथा अन्तिम क्वाटरफाइनल २१ मार्थमा न्यूजिल्याण्ड र वेष्ट इन्डिजबीच हुनेछ ।
शुरुका तीन खेल नेपाली समय अनुसार बिहान ९ः१५ र अन्तिम क्वाटरफाइनल बिहान ६ः४५ मा हुनेछ । पहिलो सेमीफाइनल न्यूजिल्याण्ड र वेष्ट इन्डिजको विजेता र दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्काको विजेताबीच २४ मार्चमा हुनेछ ।
त्यस्तै २६ मार्चमा हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा बंगलादेश र भारतको विजेतासँग अष्ट्रेलिया र पाकिस्ताबीच हुने क्वाटरफाइनलको विजेता भिड्नेछन् । फाइनल खेल २९ मार्च बिहान नेपाली समय अनुसार ९ः१५ बजे अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा हुनेछ ।